How'd it happen and more reports?: မြန်မာပြည် ၏ နမိတ်ပုံ (သို့) နာရေးကူညီမူအသင်း(ရန်ကုန်) နှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ !
မြန်မာပြည် ၏ နမိတ်ပုံ (သို့) နာရေးကူညီမူအသင်း(ရန်ကုန်) နှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ !
အမိမြေမှာ အောင်မြင်လာရင် ဖြစ်နေကျ လူမှုရေးပြဿနာလးတွေပါ...
ကျွှန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုတွေ အတော်ကိုတုန်လှုပ်ထိုက်လန့်အံ့သြသွားစေတဲ့ လူတကာတွေ အထင်ကြီးလေးစားနေတဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ရဲ့အတွင်းလူမှုရေး ပြဿနာလေးပါ...
ဘယ်သူမှန်တယ် မှားဆိုတာကိုတော့ ပြည်သူလူထုတွေလဲ ချင့်ချိမ် စဉ်းစားကျပါလို့ပြောချင်ပါတယ်....
အမိပြည်သူလူထုတွေလဲ သိထားသင့်တယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
လူတွေဟာ မောဟ ဒေါသ လောဘရဲ့ သားကောင်းတွေပါဘဲ မဟုတ်ဘူးလား!
ဘယ်သူမှာ အပြစ်ကင်းစင်ကျမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူးလို့.....
ဒီ ၀လ်ဆိုဒ်မှ ကူးယူထားတာပါ လို့ အသိပေးပါရစေ...http://tharafi.blogspot.sg/2013/09/blog-post_5.html?m=0
နာရေးကူညီမူအသင်း(ရန်ကုန်) ကို ဘယ်လိုမတရားနည်းတွေသုံး လုပ်ကြံရယူခဲ့ကြပါသလဲ
မြန်မာပြည် ၏ နမိတ်ပုံ (သို့) နာရေးကူညီမူအသင်း(ရန်ကုန်) နှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ
ယခု တတိယမြောက် ဥက္ကဌ ကျော်သူ ၂၀၀၇ မှစ၍ ခေါင်ဆောင်မူပေးနေသည်
သရဖီညွန့် ဥက္ကဌ ဦးအေးသန့် ဒေါက်တာအောင်မြင့် ဒေါ်ဌေးဌေးနိုင်
စစ်တပ်မှ ဒုတိယအကြိမ် အာဏာသိမ်းပြီး ဒုတိယအကြိမ် နှစ်-၂၀ ကျော်မှာ အရပ်သားပြည်သူတွေ (မိမိတို့) လက်ထဲပြန်အပ်မည့်၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ နိုဝင်္ဘာလ-၇ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ပသတင်းဌာနတွေ၊ ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေ၊ ပြည်သူတွေ၊ အယ်ဒီတာတွေ၊ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ပါတီတွေ၊ ကိုယ်စလှယ်လောင်းတွေ၊ ပညာရှင်တွေ၊ တချိန်က နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေ၊ အားလုံး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပြောကြ၊ ဆိုကြ၊ ရေးကြ၊ ဝေဖန်ကြနဲ့၊ ပွက်လောရိုက်ပြီး၊ ကြွက်ကြွက်ကို ဆူညံနေတာပါပဲ၊ ထွက်လာတဲ့အသံတွေထဲမှာ အားလုံးတူညီတာ တခုကတော့၊လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူဟာ ချီး၊သေး တောင်မချန်(ကတော့ပါရဲ) လုပ်ပိုင်ခွင့် ရနေပြီး၊ အားလုံးကမော့ကြည့်နေရတယ်ဆိုတာပါပဲ၊ တခုတော့ရှင်းရှင်ပဲပြော ရမယ် ဆိုရင် စစ်တပ် ဆိုတာ ရေဘူးပေါက်ထာ မလိုချင်ဘူး ရေပါဖို့ပဲလိုတယ်၊ ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ်မယ်၊
နာရေးကူညီမူ အသင်း(ရန်ကုန်) မှာလည်း ၂၀၀၃-ခုနှစ် နှစ်ပါတ်လည် ညီလာခံလုပ်တော့ ကိုကျော်သူ၊ သန်းမြင်အောင်၊ မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ရွှေဇီးကွက်)၊ ကျွန်တော်၊အပါအဝင် အသင်းသားလုပ်အားပေး(volunteer) များက "နိုင်ကိုနိုင်ရမည်"ကြွေးကျော်သံဖြင့် စာရေးဆရာ ဦးအောင်သင်း အပါအဝင်
အသင်းစတင်ထူထောင် သူ(Pioneer) အားလုံးကို၊ အသင်းမှ ဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ သန်းမြင့်အောင် ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးချပြီး၊ လုပ်လို့ရတာ အားလုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထူးထူးဆန်ဆန်းအောက်လမ်းနည်းတောင်ပါလိုက်ပါသေးတယ်။
အသင်းကြီးကို စတင်တည်ထောင်သူ (Pioneer) ၁၀-ဦးဟာ တဦးလျှင် ကျပ် ၂-သိန်း မှ ၁၀-၁၅ သိန်း ထည့်ဝင်ခဲ့ပြီးနာရေးကူညီမူအသင်း(ရန်ကုန်) အမည်ဖြင့် ၂၀၀၁-ဇန္နာဝါရီလ-၁ ရက်နေ့ မှာ စတင်၍ အသင်းဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်၊ ပထမ ဦးစွာမန္တလေးမြို့  ရှိ ဆရာတော် ဦးတိက္ခ ဦးစီးတည်ထောင် ထားသော ဗြမ္မာစို လူမူကူညီစောက်ရှောက်ရေးအသင်းကိုသွာရောက် လေ့လာပြီး နမူနာယူ၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည် အသင်းစတင်ဖွဲစည်းသူ အားလုံးဟာ သူနယ်ပယ်နဲ့ သူ ထက်ထက်မျက်မျက် ရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်၊ အစိုးရအနေနဲ့  ထိုသူတွေလက်ထက်မှာ အသင်းအောင်မြင် သွားမှာ စိုးရိမ်ပါတယ်၊ အသင်းကိုလုံးဝအားမပေးပါ၊ ထက်မြက်တဲ့သူတွေ၊ ပြည်သူမျက်နှာကြည့်မဲ့သူတွေ၊ ဆိုရင် ဘေးရောက်သွားတာပါပဲ။
U Myint Swe ဦးမြင့်ဆွေ
နာရေးကူညီမူအသင်း(ရန်ကုန်) ကို စတင်တည်ထောင်သူများတွင်ပါဝင်ခဲ့သူ အသင်းကြီး၏ ပထမ ဦးဆုံး ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ဆွေ
(ယခု ရတနာမေတ္တာ HIV ရောဂါသည်များ ကူညီမူပေးရေးအဖွဲ ဥက္ကဌ)
၂၀၀၂-ခုနှစ်မှာ နှစ်ပါတ်လည်ညီလာခံမှာ အသင်းစတင် တည်ထောင်သူတွေထဲမှာ ပါဝင်သည့် အသင်းကြီး၏ ပထမ ဆုံး ဥက္ကဌ ဖြစ်တဲ့ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ဆွေ မှ ဦးဆောင်ပြီ အသင်ကြီး၏ ဖွဲစည်းပုံ ဥပဒေကို အတည်ပြု ၍ စာအုပ်ထုတ်ဝေထားပါတယ်၊ အသင်းသားလျှောက်လွာ (၁၀၀၀) တထောင်ကျော်ရှိသော်လည်း၊အသင်းစတင် တည်ထောင် သူများအပါအဝင၊် ပုံမှန်လုပ် အားပေးနေသူ (၉၀) ကို တရားဝင်အသင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ပေးခဲ့ပါတယ်၊ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဖြစ်သူ သန်းမြင့်အောင် မှ အသင်းသားစာရင်း ပုံနိပ်စာရွက်ကို စာရွက်ပေါ်မှာ လက်မှတ်ထိုးပြီး၊ တရားဝင်သိမ်းထားပေရပါတယ်၊ သန်းမြင့်အောင် က သူကိုသိမ်းထားခိုင်သော အသင်းသား စာရင်းကိုအသုံးချပြီး အနိုင်ယူသွားတာပါ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဆိုတာအထူးအရေးကြီပါတယ်။
၂၀၀၃-ခုနှစ် နှစ်ပါတ်လည် အစီးအဝေးမတိုင်ခင် လပါတ်အစည်းအဝေးမှာ ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ဆွေ မှအသင်းသား လျှောက်လွာပုံစံ ထပ်ထုတ်မပေးဖို့ တရားဝင်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်၊ အသင်းသား လျှောက်လွှာပုံစံများကို ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံဖြစ်သည့် သန်းမြင့်အောင် က တာဝန်ယူသိမ်းဆည်းထားရပါတယ်၊ ဒါကိုလည်း သန်းမြင့်အောင် အသုံးချသွားပါတယ်။
အားလုံးကိုဘယ်လို အသုံးချခဲ့သလဲ မရေးခင၊် ပထမပြောချင်တာက ၂၀၀၃-ခှုနှစ် နှစ်ပါတ်လည်အစည်းအဝေး မတိုင်ခင် အသင်းစတင်တည်ထောင်သူတွေထဲမှာပါဝင်သည့် အသင်းကြီး၏
နာယက စာရေးဆရာ ဦးအောင်သင်း ကုို အလှူငွေ ကျပ်တသိန်း (၁၀၀,၀၀၀) ကိုအလွဲသုံးစား လုပ်တယ်ဆိုပြီး လုပ်ကြံလိုက်ပါတယ်၊
နောက်တခုက ထူးထူးဆန်းဆန်း အောက်လမ်းနည်း သုံးတာပါ၊ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အလှူရှင်တွေက ဖုံးဆက်ပြီ နာရေးအလှူငွေ လှူဒါန်းရင် ဘယ်အချိန်မဆို အလှူရှင်အိမ်ကိုသွားရပါတယ်၊ အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်အလှူခံတခုကနေ ညနေ-၅နာရီလောက်မှာ အသင်းရုံးကိုပြန်လာပါတယ်၊ အသင်းရုံးဟာထိုစဉ်က သင်္ဃာန်းကျွန်းမြို့ နုယ်ထဲက ဗြဟ္မာဝိဟာရ စာသင်တိုက် ဘုန်တော်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာရှိပါတယ်၊ အဆောက်အဦးက ဝင်ပေါက်တပေါက်ထဲသာရှိပါတယ်၊ အဲဒီဝင်ပေါက်က ခြေသုတ်၊အခင်းတွေ ဘေးဖယ်ပြီ မြေကြီးကိုတူးနေတာတွေရပါတယ်၊ တူနေသူကတော့ သန်းမြင့်အောင် ၏ လက်သပ်မွေးထားသေား တပည့် မွေးစားသား၊အသင်းသားဖြစ်တဲ့ သိန်းဇော် ပါ၊ သိန်ဇော် ကို ပါလုပ်ထာလဲ မေးလိုက်ပါတယ် မဖြေပါ၊ ဘေးမှ ပလပ်စတစ်အိတ် ကိုင်ထားတဲ့ အသင်းဝန်ထမ်းစာရေးက ပလပ်စတစ်အိတ်ကိုပြပါတယ်၊ ဒါကိုမြေမြုပ်ဖို့လို့ ပြောပါတယ်၊
ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဓါတ်ပုံ-၁၀-ပုံခန့်ကိုတွေရပါတယ်၊
နာယက ဦးအောင်သင်း၊ ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ဆွေ၊အတွင်းရေးမူ ဦးရဲမြင့်၊ဘဏ္ဍာရေးမူ မျက်ချယ်ကိုဝင်းနိုင်၊ အပါအဝင် အသင်းစတင်တည်ထောင်သူ(Pioneer) တွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပါ၊
ဝင်ပေါက်တပေါက်သာရှိတဲ့ အသင်းရုံး အပေါက်ဝမှာ လူတိုင်းခြေနဲ့နင်းအောင် လုပ်ထာပါပဲ။
ဓါတ်ပုံတွေက ဘယ်ကရသလဲဆိုရင် သန်းမြင့်အောင် ကအသင်းသားလျှောက်လွှာတွေကို ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံအနေနဲ့ တရာဝင်သိမ်းဆည်းပေးရပါတယ်၊ လျှောက်လွှာတင်တိုင်း ဓါတ်ပုံ-၂-ပုံပေးရပါတယ်၊ အသင်းစတင်ထူထောင်သူတွေလဲအသင်းသားဖြစ်ဖို့ ဓါတ်ပုံ-၂-ပုံ နဲအတူ လျှောက်လွှာတင်ရပါတယ်၊ အဲဒီဓါတ်ပုံတွေကို အသုံးချ အောက်လမ်းနည်းနဲ့ လုပ်ကြံတာဖြစ်ပါတယ်။
ကြုံတုံး ငွေကြေးကိစ္စ ပြောပါရစေ၊ သန်းမြင့်အောင် က ၂၀၀၉-သြဂုတ်လ-ထဲမှာ VOA (သို့) BBC လေလှိုင်းကနေ အသင်းမှာ ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမူ တခါမှမရှိခဲ့ကြောင်း ပြောခဲ့လို့ပါ၊ ကျွန်တော်တို့ အတွင်းရေးမူအဖွဲ့ က ဝန်ထမ်း-၂၀-လောက်ကို ငွေကြေး အလွဲသုံးစားအမူ့နဲ အလုပ်ဖြုတ်ခဲ့ရပါတယ်၊ ဝန်ထမ်းထဲက အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမူ-၂-ဦးပါပါတယ်၊ ပထမ တဦးမှာ ငွေသုံးသိန်ပါ အလုပ်တော့ဖြုတ်လိုက်တယ်၊ ငွေကိုတော့ ကိုကျော်သူ ကခဏစိုက်ရော်ပါတယ်၊ နောက်မှ ကျွန်တော်လိုက်တောင်းရတာပါ၊ နေ့၊ည သွားပြီးတောင်ရတာ တော်တော်တော့ ခက်သား ရမှပဲ နားပူသက်သာပါတယ်၊ ဒုတိယ တဦးကတော့ သူမိသားစုက ပေးပါမယ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီး အလုပ်ဖြုတ်ခဲ့ရပါတယ်၊ ယဉ်မောင်းတယောက်ကတော့ အသင်းမှားပိုက်ဆံပြတ်နေပြီးဆိုပြီး၊ အင်းစိန်းဘက်မှာ ငွေကျပ်-၄၀၀၀- ၅၀၀၀-စီ လိုက်လံတောင်းလို့ ဖြုတ်ရတာပါ၊ ကျန်သူတွေကတော့ ဈာပန ချစဉ် ငွေ-၂၀၀၀- ၃၀၀၀- တောင်သူ နဲ့ ပေးလို့ယူတဲ့သူတွေပါ၊ ပေးလို့ယူသူကို ကျပ်-၅၀၀-လောက်ဆိုရင် မသိချင်ရောင်ဆောင် နေရပါတယ်၊ ပေးလို့ယူပေမဲ့-၁၀၀၀- ကျော်ရင်ဖြုတ်ပြစ်ပါတယ်၊ ဈာပန ပိုင်ရှင်တွေကို တပြားမှမပေးဖို့ ရှင်းလင်းပြောပြထားပြီးသားပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဖြုတ်လိုမရခဲ့တဲ့သူတွေလဲရှိခဲ့ပါတယ်၊ အသင်းသား၊ အလုပ်အမူဆောင်တွေထဲကပါ၊
နာယက ဦးအောင်သင်း အပါအဝင် အသင်းစတင်တည်ထောင်သူတွေရဲ့  ဓါတ်ပုံတွေကို အသင်းအပေါက်ဝမှာ မြေမြုတ်ခဲ့တဲ့ အသင်းသား သိန်းဇော် ဟာအသင်းသားတယောက်ပါ သန်းမြင့်အောင် ၏လက်သပ်မွေးထားတဲ့ တပြည့်မွေးစားသားပါ၊ ဈာပနတခုကငွေ-၅၀၀၀-တောင်းတာသိပေမဲ့ ဈာပနပိုင်ရှင်က အလှူဘဲဆိုပြီး မပြောတာရယ် သန်းမြင့်အောင် က ကာဆီးကာဆီ လုပ်ထာကြောင့် မဖြုတ်နိုင်ခဲ့ပါ၊ နောက်မှ အသင်းမှာ မိန်းမ တော်တော်ရှုပ်လို့ ဖြုတ်ပြစ်ရပါတယ်၊ နောက်တဦးက အသင်းသားကနေ အသင်းမှား စာရေးဖြစ်သွားတဲ့ စာရေမတယောက်ပါ၊ သန်းမြင့်အောင် အသင်းမှာ လက်သပ်မွေးတပည့် မိုလို့-၈-တန်းလောက်ပဲရှိမယ်၊ စာရေးမခန့်လိုက်ရပါတယ်၊ လာလှူသူရှိရင်လဲ ငွေလက်ခ၊ံ အလှူခံဖြတ်ပိုင်းရေးပေးရပါတယ်၊ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ အားလုံးအလုပ်အမူဆောင် အမျိုးသ္မီးတွေဖြစ်ပါတယ်၊ တနေ့တဦး တာဝန်ကျပါတယ်၊ ညနေပြန်ရင် တနေ့တာ အလှူငွေကို သိမ်းသွားရပါတယ်၊ ကျွန်တော်က ဘဏ္ဍာရေးမူ အပါအဝင်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင် အိမ်တွေမှာ တပါတ်တခါသွားပြီး အလှူငွေတွေကိုသိမ်းရပါတယ်၊ အားလုံးသိမ်းပြီး အသင်းရုံးပြန် စာရေးမဆီအားလုံး စာရင်းနဲ့အပ်ရပါတယ်၊ နောက်နေ့ မနက် ကျွန်တော်ဘဏ်ကိုသွားအပ်ရမှာပါ၊ စာရေးမ နဲ့  အုပ်ချုပ်ရေးမူက စာရင်လုပ်ပြီး ရုံးရှိမီခံသေတ္တာထဲမှာသိမ်းထားရပါတယ်၊ နောက်နေ့ ကျွန်တော်ဘဏ် အပ်မယ်ဆိုတော့ မီးခံသေတ္တာထဲမှငွေကို အုပ်ချုပ်ရေးမူ ထံမှစာရေးမ ထုတ်ယူပေးရပါတယ်၊ အဲဒီလိုပေးတိုင်း မကြာခဏ စာရင်းထဲကအတိုင်းမဟုတ်ပဲ ငွေကျပ်-၄၀၀၀၀-၅၀၀၀၀-(လေး၊ငါးသောင်း) ကွာနေတာတွေ့ရပါတယ်၊အဲဒီလိုဖြစ်တိုင်း ကျွန်တော်ငွေလိုက်သိမ်တာမှာလို့လား၊ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ကပေးတာမှားလို့လား၊ ပြန်စစ်ဆေးရပါတယ်၊ စစ်တိုင်းကျန်သူတွေမမှားပဲ၊ စာရေးမ ငွေစာရင်းသွင်းတာ မှားနေတာကို မကြာခဏ တွေရပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့သာ စာရင်းတိတိကျကျမလုပ်ခဲ့ရင် ခံရမှာ၊ မဟုတ်တာလုပ်ထာသိပေမဲ့ မဖြုတ်နိုင်ခဲ့ပါ။
နောက် အလုပ်အမူဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ မော်တော်ယဉ်အဖွဲ့ ပါ၊ မော်တော်ယဉ်(ကား) ဝယ်ယူရေး နဲ့ ပြင်ဆင်ရေး အတွက်ဖွဲပေးထားတာပါ၊ အဖွဲ့ထဲကတယောက် ကားပြင်လာတယ်ဆိုပြီး ငွေပေးရန်ပြေစာ တင်ပါတယ်၊ ကျပ်ငွေ တသိန်း ပေးရမှာပါ ကားကို ကျွန်တော်တို့ အတွင်းရေးမူအဖွဲ့ က ဆင်းစစ်ပါတယ်၊ တသောင်း ခန့်သာပေးရမှာကို တသိန်း တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်၊ သန်းမြင့်အောင် လူယုံဖြစ်လို့ အရေးမယူနိုင်ခဲ့ပါ။
နောက်အမူ့ကတော့တော်တော်ကြီးပါတယ်၊ ကားဝယ်တဲ့ကိစ္စပါ မော်တော်ယဉ် အဖွဲ့ကနောက်တဦးပါ၊ သူတို့အဖွဲ့ကိုကားဝယ်ယူဖို့ ဟိုင်လတ် ၅-ချိတ် ကားရှာခိုင်းထားတာမှန်ပါတယ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းက ကား ၄-၅ စီးရှာပြီး ကားရာဇဝင် ကားရဲ့  အသေးစိတ်သပ်မှတ်ချက် (Specification) တွေ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အတွင်းရေးမူအဖွဲ့ ကိုတင်ရပါမယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အပါတ်စဉ်ရှိတဲ့ အလုပ်အမူဆောင် အစည်းအဝေကို ဘယ်ကားဝယ်သင့်တယ်ဆိုတာ တင်ရတာပါ၊ အမြဲကားဝယ်တိုင် ဒီလိုဘဲစနစ်တကျ လုပ်ခဲ့ကြတာပါ၊
ဒီတခါလဲ မော်တော်ယဉ်အဖွဲ့က သန်းမြင့်အောင် ကိုပိုင်းသူတယောက်က ဟိုင်လတ်ကားရှာလာပြီး သန်းမြင့်အောင် ကိုသွားကပ်ပါတယ်၊ ကားအင်မတန်ကောင်းတယ်၊ မနက်ဖြန် ငွေချေရမယ် လက်လွတ်လို့ မဖြစ်ဘူပေါ့ ဒါကို သန်းမြင့်အောင် ကယုံတော့ ဝယ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါ ငွေလဲမနက်ဖြန်ခါ ထုတ်ပေးလိုက်ပါ၊ အားလုံးက မကျေနပ်ပေမဲ့ လက်ခံလိုက်တယ်၊ နောက်နေ့မနက်ကြတော့ ဘဏ္ဍာရေးမူ ကသူတယောက်ထဲ ဘဏ်မှာငွေလိုက်ထုတ်ပေးရမှာ ဖြစ်နေလို့ ကျွန်တော့ကို ခေါ်ပါတယ် ကျွန်တော်လဲ အမကြီးတွေဖြစ်တဲ အတွက်ဘဏ်ကိုလိုက်သွားပါတယ်၊ ကျပ်သိန်း-၁၈၀-ထုတ်ပေးရမှာပါ၊ ကားရောင်းတဲ့ပိုင်ရှင်လဲပါပါတယ်၊ ငွေထုတ်ပြီး ပေးတဲ့အခါ ဘာတွေ့ရသလဲ ဆိုတော့ ငွေကိုအထုတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာတောင်စစ်ဆေးခြင်မရှိဘူး အိတ်တွေထဲ အတင်း ထိုးသိပ်ထည့်ပြီး သွားတော့တာပဲ၊ ကျွန်တော်လဲ ရုံးပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း အတွင်းရေးမူအဖွဲ့ ကိုခေါ် ကားကိစ္စစစ်ဆေးဖို့လုပ်ပါတယ်၊ ကားပွဲစားတန်းမှား စုံစမ်းတော့ ကျပ်သိန်း-၁၀၀-တောင်မတန်တဲ့ကားကို ကျပ်သိန်း-၁၈၀-ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊
ဒီကိစ္စမှာ မော်တော်ယဉ်အဖွဲ့က ကားဝယ်သူ၊ ဝယ်လိုက်ပါ နောက်နေ့ ငွေထုတ်ပေးလိုက်ပါဆိုသည့် သန်းမြင်အောင် တို့ ဘာမှအရေးယူလို့မရပဲ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မရှိပဲ ငွေထုတ်ပေးလို့ဆိုပြီး အပါတ်စဉ် အလုပ်အမူဆောင် အစည်းအဝေးမှာ ဘဏ္ဍာရေမူ ဖြစ်တဲ့ အမကြီးတယောက် မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ဘဏ္ဍာရေမူ က ဖြုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်၊ ခုတ်ရာတခြားထစ်ရာတခြားပါ၊ ငွေကြေး နဲ့ ပါတ်သက်ရင် သန်းမြင်အောင် ကို လုံးဝမယုံပါ၊
၂၀၀၉-သြဂုတ်လထဲမှာ၊ VOA (သို့) BBC မှ လေလှိူင်း မှ ကြေငြာပါတယ်၊ အသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့  ငွေကြေး အလွဲသုံးစားမူကိုဆွေနွေးမူမှာပါ၊ အသင်းစတင်တည်ထောင်သူ၊ နာရေကူညီမူအသင်း(ရန်ကုန်) ၏ အတွင်းရေးမူ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင် မှ နာရေးကူညီမူအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ငွေးကြေး သုံးစွဲမူနဲ့ ပါတ်သက်၍ ပြောပါလို့ပြောတဲ့အခါ၊ မိုလုံးပါတ်လည် လိမ်ပြီး၊ လေလှိူင်ပေါ်က တခါမှ ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမူ မရှိကြောင်း ပြောသွားပါတယ်၊ တတိုင်းပြည်လုံးကို လိမ်ရဲတာပါ၊မိမိတို့ အပြစ်တွေဖုံးကွယ်ဖို့ နာရေးကူညီမူအသင်(ရန်ကုန်) ၏ နာရေးအလှူငွေကျပ်သိန်း-၆၀၀-(သိန်းခြောက်ရာ) ခန့် ကို ၂၀၀၆-ခုနှစ်မှာ ဘိုးဘွားပိုင်ပစ္စည်း ပေးသလို တိတ်တိတ်ပေးခဲ့တာကို အလှူရှင်များကိုအသိပေးခြင်း၊ ပြည်သူများအားကြေငြာခြင်းမရှိသေပါ၊ ရာဇဝတ်ပြစ်မူ့ ကြီပါ၊ မင်းက သိန်းခြောက်ရာ အလွဲသုံးစားလုပ်ထာသိရက် နဲ့ ဘာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာကို မတိုင်သလဲ မေးရင်တိုင်ဖို့ ကြိုးစာပါတယ်၊ အသင်ကိုငွေလှူ ကားလှူ ထားတဲ့ ညောင်ပင်လေးဈေးကဈေးလူကြီးတွေကလဲ မကျေနပ်ပါဘူး၊ သူတို့က မင်မှားငွေကျပ်သိန်း-၂၀၀-လောက်ရှိမှ တိုင်လို့ရမယ်၊ ပြောပါတယ်၊ စိတ်လျှော့ခဲ့ရပါတယ်၊ သန်မြင့်အောင် တို့က အသင်းနာရေးအလှူငွေ နဲ့ တရားရင်ဆိုင်မှာ၊ တယောက်ခံသွားရတာကို သိထာပါတယ်၊
သန်းမြင်အောင် တို့ ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးမှာ တရားစွဲခံရတော့ နာရေးအလှူငွေတွေသုံးပြီး၊ သိန်းချီတန်တဲ့ ဆွဲချင်း တရာသူကြီးကို မကြာခဏပို့ပေးရပါတယ်၊ ကျွန်တော်ကိုတိုင် တရားရုံး အမြဲသွားပေးရလိုသိတာ၊ တဖက်လူမှာတော့ ခေါင်တွေဖြူပြီး လမ်းတောင်မလျှောက်နိုင်တော့ပါ၊ သန်းမြင့်အောင် တို့ကတော့ နာရေးအလှူငွေတွေ နဲ့ တရားရင်ဆိုင်ရလို့ အပြုံးမပျက်ပါ။
ဆရာဦးသုခ ကိုအသုံးချတာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ဆရာဦးသုခ ကိုအသင်းစတင်တည်ထောင်သူ တွေက နာယက တင်မြောက်ထားတာပါ၊ ဆရာဦးသုခ ဟာ မြန်မာပြည်၏ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ပညာရှိကြီး တဦးဖြစ်ပါတယ်၊ မျက်စိမမြင် နားသိပ်မကြား ရပေမဲ့ အသိ နဲ့ သတိ အမြဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်၊ ဆရာဦးသုခ ပြောတာရှင်းရှင်း လေးပါ၊ ငါ့မှာ နားနှစ်ဖက်ရှိတယ်၊ မင်းတို့ပြောဒါကို ဒီဖက်နားနဲ့နားထောင်မယ်၊ သူတို့ပြောတာ ကို ဒီဖက်နားနဲ့နားထောင်မယ်၊ နားနှစ်ဖက်ကိုပြပြီး၊နားနှစ်ဖက်နဲ့နားထောင်မယ် ပြောတာပါ၊ ဘဘအမွေပေးခဲ့တယ် ဆိုတာတွေ၊ ဘဘကခိုင်းလို့လုပ်ရတယ်ဆိုတာ တခုမှမဟုတ်ပါဘူး၊ လိမ်တာတွေပါ ဆရာဦးသုခ ကုိအသုံးချတာပါ။
၂၀၀၃-ခုနှစ် နှစ်ပါတ်လည် မတိုင်ခင် တလလောက် အလိုမှာ ကိုကျော်သူ၊ သန်းမြင့်အောင်၊ မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ခေါ်) ရွှေဇီးကွက်၊ ကျွန်တော်တို့ ဒဂုံသီရီလမ်း ကျောက်မြောင်းမှာရှိတဲ့ အမကြီးဒေါ်ဌေးဌေးနိုင် အိမ်မှာညနေ လျှိုဝှက် အစည်းအဝေး လုပ်ကြတော့၊ဦးစန်းမြင့် ဆိုသူအပါအဝင် လူ ၁၁-ယောက်ဖိတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်၊ အဲဒီလူတွေကို သန်းမြင့်အောင် က ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်၊ ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ဆွေ မှ လပါတ် အစည်းအဝေး မှာ အသင်းသားအသစ် လျှောက်လွှာ ကိစ္စတရားဝင် ရပ်ဆိုင်းထားဖို့၊ ပြောထားသော်လည်း၊ ထိုနေ့က အသင်းသားလျှောက်လွှာ ထိုသူ ၁၁-ဦး အတွက်ထုတ်ပေးလိုက်ဖို့ပြောပါတယ်၊ အဲဒီနေ့ကစပြီး မိမိတို့ကိုထောက်ခံမည့် အမာခံ လူ-၆၀-ခန့်ကို၊ တရားဝင် လျှေက်လွှာ ရပ်ဆိုင်းထားသော်လည်၊ အသင်းဝင်လျှောက်လွှာထုတ်ပေးပြီးစုဆောင်းထားခဲ့ပါတယ်၊ ဦးစန်မြင့် လေတပ်ထွက်ပါ အရာရှိတော့မဟုတ်ပါ နိုင်ငံခြား အလုပ်ရှာပေးရေး ပွဲစားလုပ်သူပါ၊ ကြံ၊ဖွတ် အသင်ဝင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားပါတယ်၊ ကျွန်တော့ဘဝမှား ကိုကျော်သူ အကြောင်း မကောင်းတာတွေသိထားပြီး ပြောတာ သူတဦးဘဲတွေဘူးပါတယ်၊ သန်းမြင့်အောင် ကို ဦးစန်းမြင့် ရုံးခန်းမှား မကြာခဏ တွေ့ရပြီး၊ သမက်ကို သင်္ဘောတင်ပေးဖို့ အတွက် သန်းမြင့်အောင် က ဦးစန်းမြင့် ကိုနောက်ပိုင်း အတွင်ရေးမူနေရာပေးခဲ့ပါတယ်၊ ကိုကျော်သူ ကိုတော့ ကျွန်တော် ကြိုတင်အသိပေးခဲ့ပါတယ်၊ ခင်ဗျားကို ဖြုတ်လိမ့်မယ်လို့၊ ၂၀၀၆- ကိုကျော်သူ 88-နှစ်ပါတ်လည် သွားတော့ အစိုးရက နာရေးကူညီမူအသင်း(ရန်ကုန်)၏ သတင်းစာ ထဲထည့်မူပိတ်ပင်ခဲ့ပြီ၊ ဦးစန်းမြင့် ကလည်း ကိုကျော်သူ ကိုဖြုတ်ဖို့ ဥက္ကဌ အပါအဝင် အားလုံးကိုစည်ရုံးပြီးပါပြီ၊ အသင်းသားတွေ လက်မခံလို့ ကိုကျော်သူ မပြုတ်ပဲ ဦးစန်းမြင့် အသင်းကထွက်သွားရပါတယ်၊ ဦးစန်းမြင့် ကဘာကြောင့်ဖြုတ်သလဲဆိုရင် အသင်းဟာ မှတ်ပုံတင်ရထားပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ နိုင်ငံရေးမလုပ်ပါဟု လက်မှတ်ထိုးထား၍ အခွင့်သာတုံး လုပ်လိုက်ထာဖြစ်ပါတယ်။
နာယက ဦးအောင်သင်း အပါအဝင် အသင်းစတင်တည်ထောင်သူတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီဘက်က လုပ်နေတာတွေကို မသိဘူလား၊ အဒီတုံးကသူတို့ လုံးဝမသိခဲ့ပါဘူ၊ သူတို့ကလုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူး၊ သူတို့သာ တရာဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသည့် အသင်းသားစာရင်ကိုစိတ်ဝင်စားရင် ကျွန်တော်တို့မနိုင်ပါ၊
ကျွန်တော် အဲဒီတုံးက သေသေချာချာ တွက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ် သူတို့ကိုထောက်ခံသူက ၁၀-ဦလောက် မျာနေတာတွေ့ ရပါတယ်၊ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု အသင်းသာ-၉၀-ရှိပါတယ်၊
အသင်းစတင်တည်ထောင်သူ တွေကလဲ သူတို့နည်း သူတို့ဟန် နဲ့ အပိုင်လုပ်ထားကြပါတယ်၊ ဘယ်လောက်တောင် အပိုင်ကြံထားသလဲဆိုရင်၊ အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေ့က ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ မေ့ပြီး ငြိမ်၍ ငိုင်သွားကြပါတယ်၊ တဒင်္ဂ ဘာလုပ်၍ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ ဖြစ်သွားကြပါတယ်။
အဲဒီမှာ ဝါရင့်တာက (သဘာက) စကားပြောပါတာ၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ထားတာတွေ ဘာမှလုံးဝမသိခဲ့တဲ့၊ ဆရာဦးအေးသန့် ကစကားစတင် ပြောခဲ့ပါတယ်။
တခုတော့ပြောပါရစေ၊ ကိုကျော်သူ၊ မြင့်မြင့်ခင်ဖေ(ခေါ်)ရွှေဇီးကွက်၊ ကျွန်တော်တို့ ဟာ၊ လုပ်အားပေး(Volunteer)နေရင်းနဲ့ ၂၀၀၂-နှစ်ကုန်ပိုင်းမှား အသင်းသား ၉၀-အသိမှတ်ပြုတော့မှ၊ အသင်းသားဖြစ်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ သန်းမြင့်အောင် က ကျွန်တော်တို့ အသင်းရောက်ချိန်မှာ၊ အသင်းစတင်တည်ထောင်သူများက ယုံကြည်၍ အသင်း၏ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ၊ လုပ်ကိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်၊ အားလုံးဟာ လူယုံသတ်ထာ ခံလိုက်ရတာပါ၊ ကိုကျော်သူ ကို၊ ဦးစန်းမြင့် ဖယ်ရှားဖို့ ကြိုးစားတုံးက အောင်မြင်ခဲ့လျှင် ယနေ့ သန်းမြင့်အောင် အသင်ကြီး၏ ဥက္ကဌ ဖြစ်နေပါပြီ။
သန်းမြင့်အောင် တာဝန်က အသင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဖြစ်သည့်အတွက် အသင်းသား ၉၀-၏ စာရင်းကို လက်မှတ်ထိုး သိမ်းဆည်းထားရပြီ၊ ထိုအသင်းသားစာရင်း အတိုင်း ၂၀၀၃-ခုနှစ် အသင်းနှစ်ပါတ်လည် ညီလာခံအတွက် ဖိတ်စာပေးဝေရမည်ဖြစ်ပါသည်၊ သို့သော် အသင်းသားစာရင်း တွင်ပါသော၊အသင်းစတင်တည်ထောင်သူတွေကို၊ ထောက်ခံမည့်သူများကို၊ လုံးဝဖိတ်စာပေးဝေခြင်း မလုပ်ပဲ၊ မိမိတို့ အကြံအဖန် လုပ်ထားသော အသင်းသား အတု(ဦးစန်းမြင့် အပါအဝင်)များကို ဖိတ်စာပေး၍၊ နှစ်ပါတ်လည် ညီလာခံကို တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ထားခဲံပါသည်။
၂၀၀၃-ခုနှစ် နှစ်ပါတ်လည် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၁-နာရီမှာ စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်၊ အသင်းစတင်တည်ထောင်သူများဖြစ်သည့်၊ ဦးအောင်သင်း ခေါင်ဆောင်သည့် နာယက များနှင့် အဖွဲ့ ဟာ၊ သြဝါဒ ဆရာတော်များဖြစ်သည့်ဗဟိုသံဃာနာယကအဖွဲ့  ဒုဥက္ကဌ အောင်မြေဘုံစံကျောင်းဆရာတော် နှင့် ချမ်းမြေ့  ဆရာတော်တို့ကို သူတို့ကားဖြင့် ပင့်ဆောင်လာပါတယ်၊ သင်္ဃာန်းကျွန်းမြိုနယ် သံဃာနာယက ဥက္ကဌ ဆရာတော်နှင့် အသင်းရုံးတည်ရှိရာ၊ ဓမ္မဝိဟာရကျောင်းတိုက်ဆရာတော်တို့ကိုလဲ ပင့်ဆောင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ကလဲ ကျွန်တော်တို့် အသင်းသားအစစ်-၄၀-နှင့် အသင်းသားအတု -၆၀- အပြင် သန်းမြင့်အောင် က သူထူထောင်ထားသော အခမဲ့ -၁၀-တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသား လူငယ် -၂၀-ကို လည်း ခေါ်ထားသည့်အတွက်၊ အစီးအဝေးခန်းမထဲတွင်၊ ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံမည့်သူ၊ ၁၂၀-ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်၊ အမှန်က တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသော အသင်းသား -၉၀-သာ ရှိနေရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထုံစံအတိုင်း အခန်းအနားစတင်ကြောင်း ကြေငြာပြီး၊ သြဝါဒ ဆရာတော်ကြီးများကို၊ ဦးသုံးကြိမ်ကတော့ ပါတယ်၊ နောက် ဗဟိုသံဃာ့နာယက ဒုတိယ ဥက္ကဌ အောင်မြေဘုံစံကျောင်းဆရာတော်ကြီးမှ သြဝါဒ ပေးပါတယ်၊ ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သြဝါဒဆရာတော်တပါးဖြစ်တဲ့ ချမ်းမြေ့ ဆရာတော်ဘုရား ကအသင်းကြီးကို စတင်တည်ထောင်သူ နာယက ကြီးများမှ ဆရာတော်ထံ လျှောက်ထား ပေးအပ်ထားသော စာကိုဖတ်ပြမည်ပြော၍၊ ချမ်းမြေ့ ဆရာတော်ဘုရား ကိုယ်တိုင်း ထိုစာကို ဖတ်ပြပါတယ်၊ "အသင်းစတင်တည်ထောင်သူ နာယက ကြီးများမှ အသင်းကိုပြန်လည် ပြုပြင် ပြင်ဆင်ရန်ရှိပါ၍၊ နောက် -၆-လကြာမှ အသင်းသားများ အနေ နဲ့ အသင်းကြီး နဲ့ ဆက်သွယ်ကြပါရန်"၊ဖြစ်ပါသည်၊ အစည်းအဝေးခန်မထဲမှာ ထောက်လှမ်းရေးတွေလဲ ရှိပါတယ်။က( ယခု ချမ်းမြေ့  ဆရာတော်ဘုရား၊ USA ရောက်နေပါသည်၊ မေးကြပါ။)
အမှန်ကတော့ သူတို စတင်တည်ထောင်သည့် အသင်း သူတို့ပြင်ဆင်ဒါ ဘာမှမတတ်နိုင်ပါ၊ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အရာရာကို မေ့ပြီး ငိုင်သွားကြပါတယ်၊ ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရောက်သွားပါတယ်၊ အသင်းစတင်တည်ထောင်သူ နာယကကြီးများက၊ ကျွန်တော်တို့မထင်တာ နဲ့ အပိုင်လုပ် လိုက်ထာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လဲ သူတို့ အသင်းသားစာရင်းကို လုံးဝစိတ်မဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်၊ အမှန်တော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ သူတို့ခွင်ပြုလို့ အသင်းမှား ကုသိုလ်ယူဖို့ လုပ်အားပေးလို့ရတယ်၊ သူတို့ခွင့်ပြုလို့ဘဲ အသင်းသား ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တာပါ၊ဆရာဦးအောင်သင်း ပြောဘူးပါတယ်၊"ငါတို့အသင်းကို ဘယ်သူမဆို ခွဲခြားမူ မရှိဘဲ လမ်လျှောက်ဝင်လို့ ရတယ်"၊ ဆိုတာပါဘဲ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်လဲ အသင်းကြီး၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြိုက်လို့ အသင်းတွင် အသိမရှိ
လမ်းလျှောက်ဝင်လာပြီး လုပ်အားပေးခဲ့သူ တယောက်သာဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်မှာ ပါအုပ်စုမှမရှိပါ၊ ကျွန်တော်၏ အသင်းတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားမူတွေကို၊ သန်းမြင့်အောင် တို့ကတွေပြီး သူတို့ဖိတ်လို့ သူတို့ လျှိုးဝှက်တွေ့ဆုံရာ၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ ကျောက်မြောင်းက အမကြီး ဒေါ်ဌေးဌေးနိုင် အိမ်ကိုဖိတ်ခေါ်လို့ ရောက်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါသည်၊ ကျွန်တော့ အသိစိတ်ကတော့ ကိုကျော်သူ အသင်းတွင်နေရာတခုခုရရင် အသင်းကြီးတိုးတက်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ဖြစ်ပါတယ်၊ အသင်းကြီးကို အပိုင်စီးဖို့၊ အသင်းကို မိမိတို့စတင်တည်ထောင် တယ်လို့ လိုက်အော်နေသည့်၊ အဆင့်အထိ ပြု့ လုပ်လိမ့်မည်ဟု လုံးဝမထင်ခဲ့ပါ။
ချမ်းမြေ့  ဆရာတော်၏ ဖတ်ပြသောစာအရ ကျွန်တော်တို့အားလုံး၊ ငြိမ်သွားကြပါတယ် ပါစပ်တောင် မဟနိုင်ကြပါ၊ အဲဒီမှာ အတွေ့ အကြုံ(သဘာ)ရှိပြီး ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာတွေ ဘာမှလုံးဝ မသိတဲ့ ဆရာဦးအေးသန့် က ဆရာတော်ကြီးများကို လျှောက်ထားပါတယ်၊ အသင်းကြီး ကောင်းစွာလည်ပါတ်နေပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ လည်းရှိတယ်၊ တရားဝင် မသိအမှတ်ပြုထားသည့် အသင်းသားတွေလဲရှိတယ်၊ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းဖို့ လိုအပ်ပါသလား၊ လို့လျှောက်ထားပါတယ်၊ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်လည်း သတိရပြီး ဆရာတော်ကြီးများကို၊ အသင်းသားတွေ၏ အဖြေကိုလည်းကြည့်ပေးပါ လို့လျှောက်ထားပြီ၊ နာယကကြီးများ၏ အသင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်မူကို ကန့်ကွက်ရင်ထကြပါလို့၊ အသင်းသားများဖက်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်၊ အားလုံးထကြပါတယ်၊ အားလုံးထကြသည့်အပြင်၊ သန်းမြင့်အောင် ခေါ်ထားသည့် လူငယ်တွေက ငွေတသိန်းအလွဲ သုံးစားလုပ်သည့် ဦးအောင်သင်း ထွက်သွားလို့ ဝိုင်းအော်ကြပါတယ်၊ လူငယ်တွေ ဦးအောင်သင်း ကိုဝိုင်းအော်လို့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွားပါတယ်၊ အသင်းစတင်တည်ထောင်သူ နာယက ကြီးတွေ အသင်းစတင်တည်ထောင်သူတွေ ဟာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်ထာကိုလန့်ပြီး ဆရာတော်ကြီးများကို ပြန်လည်ပင့်ဆောင်၍ အစည်းအဝေးခန်းမမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။(အားလုံးကို ဗွီဒီယို ရိုက်ထာပါတယ်)
မမျော်လင့်ဘဲ အသင်းကြီးကို လွယ်လွယ်နဲ့ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမထဲမှာ ထောက်လှမ်ရေး တွေလဲရှိပါတယ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမထဲမှာ၊ ကျွန်တော်တုိ့လူတွေဘဲရှိပါတော့တယ်၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အစည်းအဝေး ဆက်လုပ်ပြီး အသင်းသားအစစ်ထဲက အမြဲတမ်း အသင်းကြီးမှာလုပ်အားပေနေတဲ့ အသက်-၆၀ကျော် ထဲက အငြိမ့်စား ကျောင်အုပ်ဆရာကြီးတဦး၊ စာတတ်ပေတတ် ဘုန်းကြီးလူထွက်တဦး၊ အငြိမ့်စားတပ်မတော်သားတဦး တိုကို နာယက တင်ပြီး၊ ဆရာဦးအေးသန့် ကို ဥက္ကဌ တင်ပါတယ်၊ ကိုကျော်သူ က ဒုဥက္ကဌ၊ ကျန်သူတွေလဲ အသီးသီး နေရာတွေယူကြရပါတယ်၊ သန်းမြင့်အောင် ကတော့ ဒုံရင်းဒုံရင်း ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဘဲရပါတယ်၊သန်းမြင့်အောင် ၇-တန်းတောင် မအောင်ပါဘူး၊ကျွန်တော်ရှိရင် အတွင်းရေးမူ ရာထူးမပေးပါ၊ အတွင်းရေးမူ ဆိုတာ သူနေရာနဲ့သူ ဝင်ဆံဖို့လိုပါတယ်၊ သူ့ခင်ဗျာ နောက်-၅-နှစ်လောက် အမျိုးမျိုးလှည့်ပါတ် ကလိန်စေ့ငြမ်းဆင် ပြီးမှ ခုလုပ်နေတဲ့ အတွင်းရေးမူ ရာထူးရတာပါ၊ပညာတတ်တွေကိုအပြစ်ရှာ ဖယ်ရှားပြစ်လို့ တယောက်မှမရှိတော့ပါ၊ မဟုတ်မတရားတာတွေလုပ်ရတာ ပင်ပန်းလိုက်ထာဗျာ၊ နောက်နေ့မှာ အသင်းကြီးကို ပြန်လည်အသစ်ဖွဲ့ စည်းကြောင်း သတင်းစာများမှာ ထည့်လိုက်ပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်ကစပြီး အသင်းကြီး ကျွန်တော်တို့ လက်ထဲ ရောက်ရှိခဲ့ပါတော့သည်၊ အသင်းစတင်တည်ထောင်သူတွေလဲ အနားတောင်မကပ် နိုင်တော့ပါ။
ထောက်လှမ်းရေးက တိတ်တဆိတ် ထောက်ခံသည်အတွက် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ကျွန်တော်တို့ လက်ထက်မှာ အသင်းမှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကို အထင်သေးသည့်အတွက် မြန်မာပြည် အနှံ့ သွားရောက်၍ နာရေးကူညီမူ လူမူ့ရေးအသင်းအဖွဲများကို၊ ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ ထောင်ချီရှိတဲ့ လူထုကို ဟောပြောပွဲတွေ၊ လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ မြို့ တိုင်း၊ ရွာတိုင်းမှာ ဘယ်သူမှ မတားဆီး ကြပါ၊ ဒီလို အောင်မြင်မူ အတွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့် ၏ ဆုလာဒ် များကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
(ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့် ၏ ဆုလာဒ်၊ နာရေးပုံပြင်များ(၉) ကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ)